मुख्य चोकमा ट्राफिक बत्ती- उपत्यका - कान्तिपुर समाचार
मुख्य चोकमा ट्राफिक बत्ती
दुई महिनामा जडान गरिसकिन्छ : सडक विभाग
माघ १४, २०७५ दीपेन्द्र विष्ट
काठमाडौँ — भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले उपत्यकाका सबै चोकमा ट्राफिक बत्ती जडान गर्ने काम अघि बढाएको छ । मन्त्रालयले अत्यधिक सवारी चाप हुने चोकमा बत्ती जडान गर्न लागेको हो ।
दुई दशकअघि जापान सरकारको सहयोगमा निर्मित उपत्यकाको ट्राफिक लाइट प्रयोगविहीन भएपछि गुँड बनाएर बसेका परेवा । फाइल तस्बिर : कान्तिपुर
टेन्डर आह्वान गरी काम सुरु गरिएको सडक विभाग ट्राफिक महाशाखाका प्रमुख दीप बराहीले जानकारी दिए । ‘प्राथमिकताका आधारमा चोक छनोट गरेर टेन्डर आह्वान गरेका छौं, ठेकेदार कम्पनी पनि छनोट भइसकेको छ,’ उनले भने, ‘दुई महिनाभित्र ट्राफिक बत्ती बाल्छौं ।’ गौशाला, मित्रपार्क र पुरानो बानेश्वरमा सोलारसहित नयाँ ट्राफिक बत्ती जडान गरिनेछ ।
सिंहदरबार, पद्मोदय मोड, बागबजार र तीनकुनेमा विद्युतीय बत्तीसहितको ट्राफिक बत्ती मर्मत गर्न लागिएको उनले बताए । उनका अनुसार कालीमाटीमा सोलार ट्राफिक बत्ती मर्मत गरिनेछ भने कलंकीमा परीक्षण सुरु गर्न लागिएको छ ।
उनका अनुसार विभिन्न जेब्रा क्रसिङमा बत्ती जडान गर्न लागिएको छ । शिक्षण अस्पताल महाराजगन्ज, पुल्चोकस्थित जेब्रा क्रसिङमा बत्ती जडान गर्न लागिएको छ । ठेकेदार कम्पनी प्रजिल कन्स्ट्रक्सनले बत्ती जडानको जिम्मा पाएको छ ।
चार महिनाको कार्यादेश दिएको भन्दै उनले चाँडै बत्ती बाल्ने दाबी गरे । ‘काम गर्दै छ, छिटो काम गर्न भनेका छौं,’ उनले भने । प्रजिल कन्स्ट्रक्सनका म्यानेजर रामचन्द्र खन्डाले दुई महिनाभित्र बत्ती जडान गरिसक्ने बताए । ‘सामग्री जडान गर्दै छौं, अब चोकमा ल्याएर राख्ने प्रक्रिया मात्र बाँकी छ,’ उनले भने, ‘मुलुकका विभिन्न स्थानमा ट्राफिक लाइट जडान गरिराखेका छौं, उपत्यकामा चाँडै गर्छौं ।’
यसअघि उपत्यकाका ७ स्थानमा स्मार्ट ट्राफिक बत्ती बालिसकेको भन्दै ट्राफिक महाशाखा प्रमुख बराहीले आवश्यकताका आधारमा अन्य स्थानमा पनि बत्तीबालिने बताए । चैतमा महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखा, सडक विभाग, काठमाडौं महानगरपालिकाले मर्मत तथा नयाँ जडान गरेर महाराजगन्जस्थित नारायणगोपाल चोक, सोल्टी मोड, नयाँबानेश्वर चोक, पुतलीसडकस्थित पद्मोदय मोडमा लाइट राखिएको हो । कुमारी बैंक र काठमाडौं महानगरपालिकाअगाडि स्मार्ट ट्राफिक लाइट जडान गरिएको छ । पहिलो चरणमा नमुनाका रूपमा यी चोकमा जडान गरिएको थियो । लाइट जडान यार्सा टेक्नोलोजीले गरेको थियो ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवहरि सापकोटाले मर्मत र नयाँ टेन्डर गरेर बत्ती जडान गरिने बताए । ‘यो काम चलाउ मात्र हो, अब नयाँ प्रविधिअनुसार बत्ती जडान गर्ने सोचाइमा छौं,’ उनले भने, ‘एक स्थानबाट सबै चोकको ट्राफिक जाम नियन्त्रण गर्छौं ।’ सडक विभागले बिग्रेका बत्ती मर्मत नगर्दा १० लाखभन्दा बढी सवारीलाई १ हजार २ सय ट्राफिक प्रहरीले हातको इसारामा व्यवस्थापन गर्दै आएका छन् ।
बिग्रेका बत्तीको मर्मत र जडान हुन नसकेको भन्दै यातायात तथा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको चर्को आलोचना भएपछि सरोकारवाला निकायले प्रक्रिया अघि बढाएको हो । पैदलयात्रीलाई समेत अप्ठ्यारो भएकाले जेब्रा क्रसिङमा समेत बत्ती राख्न सुरु गरिनेछ ।
लाइट जडानपछि ट्राफिक प्रहरीलाई केही राहत हुने ट्राफिक महाशाखा प्रमुख वसन्तकुमार पन्तले बताए । ‘थोरै भए पनि ट्राफिकलाई राहत मिल्छ,’ उनले भने, ‘सवारी साधनको संख्या कहाँबाट कहाँ पुगिसक्यो, हामी हातकै इसारामा ट्राफिक जाम नियन्त्रण गर्दै छौं ।’ विभागका अनुसार उपत्यकामा ३ सय ६५ बत्ती भए पनि मर्मत हुन सकेका छैनन् ।
झन्डै दुई दशकअगाडि जापान सरकारको सहयोगमा राजधानीका ११ वटा मुख्य चोकमा ट्राफिक बत्ती जडान गरिएको थियो । ती सबै बिग्रिसकेका छन् । सरकारले थप २० चोकमा ट्राफिक बत्ती जडान गरेको थियो । राजधानीमा कालोपत्रे सडक १५ सय किमि छ, जसमध्ये ५ सय किमि सडक विभाग र बाँकी हजार किमि सडक महानगर र नगरको जिम्मामा छन् । प्रकाशित : माघ १४, २०७५ ०८:४४
‘सम्पदा मिच्नेलाई छुट, बचाउनुपर्छ भन्नेलाई ५३ दिने म्याद ? यो फैसला दुराशयपूर्ण छ ’
माघ १४, २०७५ दामोदर न्यौपाने
काठमाडौँ — काठमाडौं– काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर विद्यासुन्दर शाक्यले ठमेलको एक चैत्य र सँगै रहेको बाटो तथा इनार सार्वजनिक भएको फैसला गरे । यी तीनैवटा सार्वजनिक सम्पत्ति भएकाले चैत्य छेउमा लगाएको पर्खाल भत्काएर बाटो खुला छाड्न आदेश दिए । तर घरभित्र आधा परेको सार्वजनिक इनारको विषयमा केही बोलेनन् ।
प्राचीन अशोक चैत्य परिसरमा रहेको इनारको आधा भाग अतिक्रमण गरी घर बनाउनेलाई समयमै रोकेर कानुनको दायरामा ल्याउनुपर्नेमा प्राचीन इनार मिचिखानेलाई नै प्रश्रय दिएको भन्दै जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता भएको छ । शाक्यले उपमेयरको कार्यक्षेत्र मिचेर सम्पदासम्बन्धी यो विवादको गत महिना फैसला गरेका थिए । फैसलाविरुद्ध जनहित संरक्षण मञ्चका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्मा, ललितपुर महालक्ष्मी बस्ने सञ्जय अधिकारी र मध्यपुर थिमि नगरपालिकाका जीवन घिमिरेले मुद्दा दर्ता गरेका हुन् ।
ठमेलमा जीर्णाेद्धार गरिएको लिच्छविकालीन चैत्यका सँधियारले सार्वजनिक इनार मिचेको महानगरले फैसलामा उल्लेख गरेको थियो । ‘घरले इनार मिचेको छ । महानगरले पनि इनार सार्वजनिक भनेको छ । तर इनार कसरी सार्वजनिक प्रयोजनमा ल्याउने केही भनिएको छैन,’ अशोक विहार जीर्णाेद्धार एवं संरक्षण समितिका अध्यक्ष सञ्जीव श्रेष्ठ भन्छन्, ‘सम्पदा मिच्नेलाई केही नभन्ने अनि हामी बचाउनुपर्छ भन्नेलाई ५३ दिने म्याद दिइएको छ । यो फैसला दुराशयपूर्ण छ । यो निर्णयविरुद्ध हामी अदालतको ढोका ढकढक्याउन गएका हौंं ।’ काठमाडौं महानगरपालिका २६ नम्बर वडा कार्यालय र जग्गाधनी विष्णु श्रेष्ठ र मीरा श्रेष्ठलाई विपक्षी बनाएर मुद्दा दर्ता गरिएको हो ।
इनार भएको जग्गा अहिले व्यक्तिको नाममा छ । ठमेल क्षेत्रका दुईवटा नक्सा प्राप्त भएका छन् । एउटा नक्सा २००१ सालको नापीमा आधारित छ भने अर्को ०३३ सालमा । २०३३ सालको नक्सा जारी हुनुअघि यो क्षेत्रलाई ‘ठमेल मौजा’ भनेर चिनिन्थ्यो । त्यतिबेला कोहीसँग पनि लालपुर्जा थिएन । भोगचलनको अधिकार मात्रै थियो ।
२०२४ सालमा यहाँ घर बन्यो । ‘घर बन्दा मिचिएको जग्गालाई घरधनीकै नापमा कायम गरिदिए । मिचिएको झन्डै ४ फिटको बाटो चैत्यको जग्गातिर कायम गरिदिएको नक्सामा देखिन्छ । यसो गर्दा नापीले सार्वजनिक बाटो मिचेको देखाइएन,’ श्रेष्ठ भन्छन्, ‘समस्या त्यतिबेलादेखि भयो ।’
पुरानो नक्साअनुसार विहार कित्ता नं. २ सय २३ मा छ । नयाँमा १ सय ३५ कित्ता कायम गरिएको छ । विहारसँगैको पश्चिमतिरको घर ०३२ सालसम्मको नक्सामा कित्ता नम्बर २ सय २२ मा छ । नयाँमा १ सय ३४ कित्तामा पर्छ । कित्ता नम्बर २ सय २२ को जग्गाको पूर्वतिर बाटो प्रस्ट देखिन्छ ।
विहार पुनर्निर्माण गर्ने क्रममा बाटो मिचिएको भन्दै काठमाडौं महानगरपालिकामा उजुरी दिएपछि यो तथ्य बाहिर आएको थियो । ‘सार्वजनिक बाटो मिची गरिने निर्माण रोकिपाउँm’ भन्दै जग्गाधनी विष्णु श्रेष्ठ र मीरा श्रेष्ठले महानगरपालिकामा उजुरी दिएका थिए । मुद्दाको अहिले महानगरले अन्तिम निर्णय गर्ने तयारी गरेको छ । ‘बहस धेरै दिन होला भनेर हामीले सबै प्रमाण बुझाएनौं,’ श्रेष्ठले भने, ‘तर एकै दिनमा बहस सिध्याइदिए । पछि मेयरलाई प्रमाण बुझाउन गयौं । मेयरले प्रमाण पछि लिन मिल्ने वा नमिल्ने कानुन विभाग प्रमुखसँग सोधेर निर्णय गर्ने बताउनुभयो ।’
सातौं शताब्दीको मानिएको यो स्तूप बेवारिसे अवस्थामा थियो । २०३७ सालमा जग्गाको उत्तरतिर काठको ढोका हालिएको थियो ।
प्रकाशित : माघ १४, २०७५ ०८:४२